Sidee dhabarka laga helaa ilaha webka ee PR8 saameyn karto boggaaga SEO?
Xidhiidhada soo socda ayaa ah qodobbo muhiim u ah bogagga internetka. Haddii aad rabto inaad sare u qaaddo jadwalka taraafikada iyo mawaadiicda jadwalka, habka ugu fiican ee loo qaban karo waa in la helo PR 8 backlinks. Waxaa jira ilo webiyo badan oo madax banaan oo aad ka heli kartid tayada dhabarka ee tifaftiran. Si kastaba ha noqotee, ma aha in dhammaan websaydhku yaqaanaan sida loo helo dib-u-celinta ilahaas oo waxay u maleynayaan in aysan suurogal ahayn ama kharash badan.
Qodobkani, waxaan ka wada hadli doonnaa hababka helitaanka dib-u-dhiska PR-ka ee laga helo ilaha webka ee Google iyo goobaha sida Google+, iyo kuwo kale. Waxaan ku tusi doonaa in ay tahay mid sahlan oo bilaash ah si aad dib ugu hesho Google. Sidaa daraadeed nala bilaabi!
Sida loo abuuro PageRank 8 oo dib loo eego oo ka yimid Google Drive?
Talaabooyinka soo socda ayaa kaa caawin doona inaad hesho xiriiryo iyo xiriiro dibadeed oo ka duwan Google iyo kor u qaadida maamulka domainkaaga. Waxaa intaa dheer, backlinks waxay kaa caawineysaa inaad kordhiso boggagaaga PageRank iyo kor u qaadista taraafikada boggaaga.
Gali koontadaada Gmail ama haddii aadan weli haysan mid, abuur fariin faahfaahin Gmail.
Furo Gmail-kaaga oo guji qaybta "My Drive".
Abuur galka cusub Google-ga. Waxaad ku siin kartaa magac kasta oo faylka ah.
Kadib markaa waxay abuuraan faylka HTML ee qoraalka. Halkan waa inaad ku dhejisaa xiriirintaada boggaaga qoraalka ku haboon. Si loo dhamaystiro hawshan, waxaad u baahan tahay inaad geliso HTML khaas ah HTML-kaaga ama URL-ka goobta.
Dib u Bilaash ah oo Dib-u-dajin ah oo ku socda Website-kaaga
Marka koodhka la dhammeeyo, waxaad u baahan tahay inaad faylkan gashid oo feyl u muuqato rukumo Google. Hubso inaad isticmaasho tag dofollow ah oo ku xiran boggaaga internetka. Kadib waxaad riixdaa "Share" badhan oo la wadaag faylkaada dadweynaha.
Xulashada furan ee furan oo dooro "Public on the web". Faylkaaga ayaa u furan cid walba.
Riix faylka oo xulo "Faahfaahinta iyo waxqabadka".
Dhinaca midig, waxaad arki doontaa "Faahfaahinta". Isku-duub xiriirkaaga halkaa.
Furo tabka cusub ee shabakadaada oo ku dheji URL oo la koobiyeeyay.
Ku qor magacaaga faylka oo geli.
Natiijo ahaan, waxaad arkeysaa bogga loo baahan yahay oo dib loo celiyo.
Sida loo abuuro PageRank 8 oo dib loo eego Google Plus
Google Plus waa warbaahinta bulshada oo ay leedahay Google taas oo bixisa fursad cajiib ah oo loogu talogalay khabiiro SEO ah si loo abuuro qaar ka mid. Waxaad dhisi kartaa gadaal dib u celin PR8 oo ku saabsan qaybta iyo qaybta sheekada. Waxaa intaa dheer, waxaad abuuri kartaa isku xiro labada iyo bogga labadaba adoo isticmaalaya qoraalkaaga. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad buuxisid macluumaadka ku saabsan naftaada qaybaha kor ku xusan iyo ku dheji dhabarka dofollow goobtaaga.
Sida loo abuuro PageRank 8 dofollow backlinks ka Wikipedia?
Qalab qiimo leh oo laga helo boggaaga ama blog ayaa loo isticmaali karaa iyada oo ah ilaha Wikipedia. Adigoo baadigoobaya aaggaaga khibrad, adoo ku daraya mawduuc munaasib ah iyo soo jeedinta hay'adda waxay abuuri doontaa dhowr tayo oo tayo sare leh oo PR10 dib u hagaajinaya ilahaaga webka Source .